कोभिड–१९ : कसरी गरिन्छ परीक्षण, के हो सुरक्षा सामग्री?
दीपक अधिकारी मंगलबार, चैत १८, २०७६, ०९:३१
काठमाडौं- झण्डै एक शताब्दी अघि लाखौँको मृत्युको कारण बनेको स्पेनिस फ्लु पछिको सबैभन्दा ठूलो महामारी मानिएको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट यतिखेर विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि यस रोगबाट संक्रमितको संख्या पाँच पुगेको छ । ती सबै विदेशबाट आएका भएकोले तिनले यात्राको क्रममा अन्य व्यक्ति, आफ्नो घर परिवारका सदस्य र समुदायमा सारेको हुनसक्ने आशंका व्याप्त छ ।
हाल काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा कोभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने काठमाडौको वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल लगायत देशभरिका २५ अस्पताललाई परीक्षणका लागि तोकिएको छ । हालसम्म पनि काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोभिड–१९ बाट संक्रमितको नमुना परीक्षण हुँदै आएकोमा धरानस्थित बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि प्रयोगशाला बनाइएको छ । देशभरिबाट प्रयोगशालामा ल्याइएका नमुनाको परीक्षणकाे परिणाम २४ घन्टाभित्र देखिने जनाइएको छ।
सुवेदीका अनुसार दोस्रो विधि सेरोलोजी मानिसको रोग प्रतिरोधी प्रणालीको भाइरससँग जम्काभेट भएपछि जीवाणुविरोधी तत्व पत्ता लगाउने विधि हो । यस विधिमा रगतमार्फत शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई मापन गरी संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाइन्छ । सेरोलोजी संक्रमण भएकाे केही समय भइसके पछि चाहि प्रभावकारी हुने सुवेदी बताउँछन् । “मैले थाहा पाएसम्म हालसम्म भरपर्दो सेरोलोजी टेस्ट छैन,” उनले भने, “तर हालै अमेरिकाको एब्बोट कम्पनीले ल्याएको भनिएको उपकरण चाहिँ परीक्षणका लागि गेम चेन्जर हुनसक्छ ।” अमेरिकी सरकारको नियमनकारी निकाय फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडिए) ले विक्रीका लागि अनुमति दिइसकेको उक्त उपकरणले पाँच मिनेटमै परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । दक्षिण कोरियाका पाँच कम्पनीले उत्पादन गरेका र्यापिड टेस्टिङ किट त्यहाँकोे नियमनकारी निकायले स्वीकृत गर्नुका साथै एफडिएले तीमध्ये तीन किटलाई अमेरिकामा प्रयाेगकाे अनुमति दिएको छ ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले के कस्ता सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ?
भारतीय मुलका अमेरिकी चिकित्सक–लेखक गवाण्डेकै जस्तै चिन्ता छ, डा पुष्पमणि खरालको पनि । “यो रोग स्वास्थ्यकर्मीलाई नलागोस् भनेर धेरै सचेत हुनुपर्छ,” उनले भने । यसका लागि पुरै शरीर ढाक्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अर्थात् पीपीइ (जसमा विशेष खाले चश्मा, पञ्जा, मास्क र जुत्ता पर्छन्) लगाउनुपर्छ । “अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले एन९५ मास्क, डबल ग्लब्स, बुट, गाउन आदि लगाउनैपर्छ । यो सबै डिस्पोजेबल (एक पटक लगाएपछि नष्ट गरिने) हुन्छ,” उनले भने । हालै सरकारले चीनबाट ल्याएका सामग्रीमा पीपीई, संक्रमित जाँच्ने उपकरणलगायत छन् । नेपालमै पनि कति कम्पनीले मास्क र पीपीइ उत्पादन गरेको बताएका छन् । तर तिनको गुणस्तर जाँच्नुपर्ने खरालको तर्क छ । “जसले पायो त्यसले मास्क बनाएर काम छैन । ठूलठूला छिद्र भएका मास्कको कामै छैन,” उनले भने । खरालका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले जोखिमको तह अनुसार पीपीइ लगाउनु पर्नेछ । पहिलो तहमा शुरुमा जाच्ने स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक र नर्स र अन्त्यमा सघन उपचार कक्षमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स अनि प्रयोगशालामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पर्दछन् । “यो कसरी लगाउने, खोल्दा कसरी खोल्ने भन्ने विचार पुर्याउनुपर्छ,” उनले भने । अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) ले यससम्बन्धी एक निर्देशिका प्रकाशित गरेको छ।
संक्रमितको पहिचानपछि कसरी गरिन्छ उपचार?
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के हो ? यो किन आवश्यक छ?